10 Xiddig Oo Arsenal Ah Oo Guul Soo Laabasho Ah Oo Ay Ku Rafaadeen Ka Gaaray Aston Villa Iyo Gunners Oo Kaalinta 4aad Soo Gashay | Laacib.net
10 Xiddig Oo Arsenal Ah Oo Guul Soo Laabasho Ah Oo Ay Ku Rafaadeen Ka Gaaray Aston Villa Iyo Gunners Oo Kaalinta 4aad Soo Gashay
Arsenal ayaa seddex kulan ka dib ku soo laabatay wadada guusha Premier League ka dib markii ay guul ay u rafaadeen ka gaareen kooxda u soo dalacday xilli ciyaareedkan horyaalka ee Aston Villa oo ay uga badiyeen 3-2 iyadoo Pierre-Emerick Aubameyang uu mar kale noqday geesiga kooxda.
Gunners ayaa labo jeer hogaanka laga qabtay iyadoo Pierre-Emerick Abuameyang uu goolka guusha dhaliyay dhamaadkii ciyaarta, waxaana ay Gunners ku ciyaareysay qeybtii labaad oo dhan 10 ciyaaryahan ka dib casaan laga siiyay daafaca Maitland-Niles.
Bukayo Saka ayaa lagu soo bilaabay kulankiisii ugu horeysay ee Premier League iyadoo tababare Unai Emery uu hal bedel ku sameeyay shaxdii ugu danbeeyay ee kulankii ay Watford barbaraha la galeen. Wuxuu Bukayo Saka ku bedelay Mesut Ozil oo xilli ciyaareedkan oo dhan ciyaaray 71 daqiiqo.
Aston Villa ayaa ciyaarta si fiican ku bilaabatay iyagoo ku qasbay goolhaye Leno inuu badbaadin fiican sameeyay halka Arsenal ay durbadiiba isku dayday inay ciyaarta kala wareegto kooxda u soo dalacday Premier League xilli ciyaareedkan, Aubameyang ayaana halis geliyay dhowr jeer.
Laakiin Aston Villa ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta daqiiqadii 20aad iyagoo banaanka soo dhigay ceebta difaacasho ee Gunners. McGinn oo cidna aysan ka horimaanin ayaa galay xearada ganaaxa isagoo helay kubad karoos ah uu soo dhigay El Ghazi, waxaana uu daba mariyay goolhaye Leno.
Daafacyada Arsenal ayaa iska taagnaa iyagoo is eegaya islamarkaana mooda in offside uu jiray, laakiin wax halis ah goolkaan uguma jirin in la diido.
Daqiiqadii 42aad ayaa Arsenal xaalka uu ku sii xumaaday markii uu jaale labaad qaatay Maitland Niles kaasoo casaan loo taagay isagoo qalad ku galay Taylor, waxayna Arsenal noqotay 10 ciyaaryahan.
Sannadkan 2019 kaliya Maitland-Niles waxauu casaan qaatay labo jeer, waa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Arsenal ee hal sanno gudaheed labo casaan ah qaata horyaalka Premier League tan iyo Laurent Koscielny sannadii 2013.
Arsenal ayaa rigoore ku guuleysatay daqiiqadii 58aad markii uu Guendouzi galay xerada ganaaxa waxaana qalad ku galay Engels iyadoo garsoore Jon Moss uu tilmaamay gool ku laad, halka VAR ay ansixisay go’aanka.
Saxiixa cusub ee Arsenal Nicolas Pepe ayaa u soo istaagay oo shabaqa ku hubsaday isagoo dhaliyay goolkiisii ugu horeysay ee Gunners, waxaana uu ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1 ah.
Laakiin Aston Villa ayaa 90 ilbiriqsi ka dib ku soo laabatay hogaankeeda , Grealish ayaa kubad u dhigay Wesley kaasoo kubada uga hormaray Sokratis islamarkaana dabamariyay goolhaye Leno.
Arsenal ayaa culeys sii saartay Aston Villa iyadoo Luiz laga badbaadiyay laad xor cajiib ah, halka Guendouzi fursad fiican isna laga beeniyay iyadoo Aubameyang uu birta garaacay.
Gunners ayaa ugu danbeyn heshay goolka barbaraha daqiiqadii 81aad ee ciyaarta markii daafaca Calum Chambers uu shabaqa ku taabtay kubad ay ku guuldareystaya inay Aston Villa iska bixiso.
Daqiiqadii ku xigtay Aston Villa ayaa ku dhawaatay inay hogaanka mar kale soo ceshato laakliin Leno ayaa fursad fiican ka beeniyay Nakamba.
Daqiiqadii 84aad Arsenal ayaa markii ugu horeysay hogaanka ciyaarta la wareegtay markii uu shabaqa u soo taabtay Pierre-Emerick Aubameynag kaasoo dhaliyay laad xor ah oo isaga lagu galay, waxayna kooxda Gunners oo bandhigtay dabeecad aan isdhiibis aheyn.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa dhaliyay 16 gool 16kii kulan ee ugu danbeysay ee tartamada oo dhan ee Arsenal oo ay ku jiryo afartii kulan ee ugu danbeysay uu shan kulan dhaliyay.
Ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 3-2 oo ay guusha ku raacday kooxda Arsenal oo guul soo laabasho ah ku sameysay garoonkeeda Emirates Stadium. Arsenal ayaa soo gashay kaalinta afaraad iyagoo leh 11 dhibcood.
Xiddig Muhiim Ah Oo Ka Maqnaanaya Atletico Madrid Kulanka Ay Wajahayaan Real Madrid Sabtida
2 responses to “10 Xiddig Oo Arsenal Ah Oo Guul Soo Laabasho Ah Oo Ay Ku Rafaadeen Ka Gaaray Aston Villa Iyo Gunners Oo Kaalinta 4aad Soo Gashay”
Beenbadana meusut Özil maciyarin nagadaya beenta
wey u qalantay arsenal